Inta badan, waxaa loo baahan yahay si loogu badalo file ka ay qaab MP4 asalka qaab MPEG. MPEG gaaban for 'U guuritaanka Sawiro Khubarada Group], oo waxaa loola jeedaa qoyska heerarka digital video riixo iyo qaabab file abuuray by Group ISO ah. MPEG waxaa loo maleeyey inay soo saaraan videos tayo ka wanaagsan yahay qaabab ay ku tartamayaan sida QuickTime. Si ka duwan ka hor, markii kumbiyuutarada baahan yahay codecs hardware inuu u ciyaaro files MPEG, technology ee maanta waxaa gebi ahaanba ku tiirsan codecs software oo ay la socdaan waxyaabaha kale ee barnaamijyada sida Real Networks, ama Windows Media Player. Xataa iyada oo ay riixo lousy iyo xogta hoos, MPEG waa guulaha isagoo isha aadanaha khaladaad ay ka baxsadaan.
Part1: Best MP4 in MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 Video Converter
Part2: MP4 Free in MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 Video Converter
Part3: MP4 Online in MPEG / MPEG-1 / MPEG-3 Video Converter
Part4: Aqoonta Extended u MP4 iyo MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 Qaabka
• Iyada oo taageero ka wifi, users hadda wareejin karaan videos ay ay casriga ah. Tani waxay ka saartaa in ee fiilooyinka aan micno lahayn.
• A dhisay qalab tafatirka saamaxaya kuwa isticmaala in lagu daro qaybaha kala duwan in ay videos. Interface tafatirka Waa wax fudud oo laga heli karaa mid ka mid user ku darto gii saamaynta video.
• A hal click Video Downloader caawin lahaa inaad u keydisaa kasta video offline marka aad u aragto in aad browser. Qaadashada files warbaahinta aad kaliya noqday fudud la codsigan.
Sida loo Beddelaan MP4 galay MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate?
Diinta MP4 galay mid ka mid ah qaabab MPEG idiin siiyey inaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo Wondershare Video Converter Ultimate website-ka.
Download iyo rakibi Wondershare Video Converter Ultimate website-ka. Habka loo xirxiro si toos ah u soo bilowday ka dib markii download la dhamaystiro browser. Habka Converter ee rakibo sahlan oo ay la socdaan talaabo talaabo Hanuun waa wax fudud qof kasta u gashato this.
Dooro file MP4 aad rabto in aad si loogu badalo ka. Haddii aad raadinayso in aad ka fogaato ikhtiyaarka Upload daalin, aad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi file in interface barnaamijka. Si kastaba ha ahaatee, interface ka timaadaa iyadoo ay xulashada dhaqanka ee 'Upload'.
Marka aad dhamaysato Upload, waxaad isbedel qaar ka mid ah si aad video ka dhigi kara qalabka uwareegay interface ka. Tani waa u fududahay ah in la isticmaalo qalab, wuxuuna fursado badan si kor loogu qaado aad video.
Marka habka tafatirka waa dhameystiran, xulo qaab beddelidda ka-gacanta dhinaca midig, oo guji 'badalo.' Tani waa in la bilaabo beddelidda ee faylka. Meesha dhinaca bidix gacanta ku qeexan yihiin folder meesha file badbaadi lahaa.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo MP4 in ay MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 Video Converter for Windows
Wondershare Free Video Converter kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo videos qaab kasta oo xawaare ka wanaagsan. Iyada oo la caddeeyo iyo muuqaalada ku filan, Converter this lagala soo bixi karaa Wondershare fudayd. Habka loo xirxiro waxay tahay si caddaalad ah u fududahay. Sidoo kale, Converter wuxuu la iman doonaa soo diyaariyeen balaadhan oo ah muuqaalada, jidaynayey isticmaala inay tijaabinayo qaabab video ay.
Sida loo rogo ama file MP4 galay MPEG / MPEG-1 / MPEG-2 isticmaalaya Wondershare Video Converter Free
Wondershare Video Converter Free Bixisaa xarunta si loogu badalo files MP4 galay MPEGMPEG-1 / MPEG-2 format.
Marka aad la sameeyo habka dajinta iyo rakibo (si aad u hanuuntaan doonaa tallaabo kasta oo ku rakibo), oo ay maamulaan barnaamijka on your computer. Halkaa marka ay marayso, waxaa lagu talinayaa in aad qaadato xoogaa waqti ah in loo isticmaalo in lagu interface ka.
Waxaad gali kartaa video la doonayo in la badaley. Interface ayaa kuu ogolaanaya in aad si fudud u jiidi video ah barnaamijka, iyada oo aan ka kaaftoomi mid ka mid ah u soo xulan folder khaas ah. Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarka kale ah sidoo kale ayaa loo diyaariyay.
Marka aad uploaded video ah barnaamijka (tani waxay qaadan kartaa muddo ah haddii video waa mid aad u weyn), waxaad dooran kartaa qalabka tafatirka oo kuu ogolaanaya in aad ku darto saamaynta badan si aad video. Qalab tafatirka waa cadaalad ah fududahay in la isticmaalo iyo u oggolaanaysa in looga gol leeyahay ee video ah.
Marka aad ku badbaadi isbedelada, xulo qaab la doonayo wax soo saarka dhinaca column gacanta midig (MPEG / MPEG-1 / MPEG-2), iyo qaab beddelidda, adigoo gujinaya 'Beddelaan'. Waxaad hadda u helida horumarka aad diinta ee interface ka.
Description MPEG (gaabinta ah u Motion Picture Khubarada Group) waa qaab weelka loo isticmaalaa in uu kaydiyo video iyo maqal ah labada dhinacba in ay ku yimaado heerarka kala duwan sida MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4 iyo wax ka badan ah.
MP4 waa qaab weelka loo isticmaalaa in lagu kaydiyo video, audio, iyo xogta subtitles ah. Tan iyo dukaamada sida Lugood isticmaalaa qaab weelka iyo waxa la isticmaalay iyada oo iPod iyo Playstation (PSP). Waxa uu noqdo qaab caan ah.
Beegsasho Qaabka MPEG ah
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file MP4 ah
Sida loo Beddelaan AVI in DVD ee Mac / Win
Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in MP4 si fudud oo dhaqso
Sida loo Encode Files MP4 la Encoder MP4 ah
15 Dariiqo oo Laablaab MP4 on Mac iyo Windows
> Resource > MP4 > Sida loo badalo MP4 in MPEG / MPEG-1 / MPEG-2?